Sawirro-Musharax Madaxweyne Farmaajo Oo La Gudoonsiiyey Shahaadada Musharaxnimo. – Radio Daljir
Sawirro-Musharax Madaxweyne Farmaajo Oo La Gudoonsiiyey Shahaadada Musharaxnimo.
Janaayo 28, 2017 7:43 b 0
Muqdisho, January, 2017 –Musharax Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ah musharaxiinta ugu cad cad kursiga madaxtinimo ee dalka ayaa maantay guddiga doorashada ka guddoomay shihaadadii tartanka kaddib, markii uu buuxiyay sharuudihii looga baahnaa.
Musharax Farmaajo oo horay dalka uga soo noqday R/wasaare ayaa xilkaan u tartamaya markii 2aad, waxaana dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya, lana socda arrimaha doorashada ay ku tilmaamayaan in uu yahay musharax haysta fursad iyo taageero badan oo ka imaanaysa dhanka shacabka iyo baarlamaanka Soomaaliya.
Md. Maxamed Cabdullaahi waxaa uu musahraxiinta kale uga duwan yahay astaamo gaar ah oo fursad wayn u noqon-kara tartanka kursiga Madaxwaynaha Soomaaliya. Waxaa si gaar ah loogu hanwayn-yahay arrimaha uu wax ka qaban-karo ammaanka, dhismaha ciidamada qalabka sida, taabagalinta dowladnimo taam ah oo lagu midaysan-yahay.
Sawirro-Madaxweynaha Puntland oo booqday xarumaha dowladda ee Bandar-bayla.
DHEGEYSO-Idaacadda Daljir oo booqatay dadka soo hayaamay kana waraysatay xaalkooda.